Warbixin+Muuqaal: Ethopia ma waxay foolaneysaa dagaal sokeeye? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Warbixin+Muuqaal: Ethopia ma waxay foolaneysaa dagaal sokeeye?
Warbixin+Muuqaal: Ethopia ma waxay foolaneysaa dagaal sokeeye?
WARBIXIN: Ethopia ma waxay foolaneysaa dagaal sokeeye?
Toban maalmood ka hor ayay ahayd markii xukuumadda ra’iisul wasaare Abiy Axmed ay ciidamada millatariga dalkaas amar ku siisay in ay weerar ku qaadaan gobolka Tigreega oo fariisin u ah dhaqdhaqaaqa TPLF.
Dagaallada haatan socda ayaa sabab u noqday dhimashada boqollaal qof oo u badan safafka ciidamada iyo jabhadda ka horjeedda waxaana intaa sii dheer in ay jiraan dad farabadan oo ka tallaabay xudduudda ay Itoobiya la wadaagto Suudaan si ay uga badbaadaan
Ismaandhaafka siyaasadeed ee dagaalka.
Dagaalkan ayaa billowday kaddib markii maamulka gobolka Tigreegu uu gaashaanka u daruuray dib u dhigsi ay xukuumadda dhexe ku samaysay doorashooyinka dalkaas iyada oo marmarsiyo ka dhiganaysa faafitaanka xanuunka COVID-19.
Milatariga dowladda Itoobiya ayaa sheegay in muddadii uu dagaalka socday la dilay 550 ka tirsan ciidamada maamulka Tigreeda.
TPLF ayaa muddo dheer qeyb ka ahaa isbahaysiga muddada dheer xukumayay dalkaasi Itoobiya balse ra’iisalwasaare Abiy Axmed ayaa wiiqay awoodda TPLF kaddib markii uu xilka la wareegay sanadkii 2018.
Hoggaamiyeyaasha Tigreeda ayaa maamulka ra’iisalwasaare Abiy ku eedeeyay in uu beegsanayo iyaga isla markaana uu haatan yahay mid aan sifo sharci ah ku joogin xafiiska maadaama muddo xileedkiisii uu dhammaaday.
TPLF ayaa bishii Sebteembar ee sanadkan gobolka Tigreeda ka qabtay doorasho dowladda dhexe ay ku tilmaantay sharcidarro.
Dhanka kale saraakiisha dalka Sudan ayaa sheegaya in ugu yaraan 6000 oo ah qaxooti ka soo qaxay dagaalka ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya ay soo gaareen xudduuda Sudan.
Xero qaxooti oo loogu talagalay dadkani ayaa la dhisay, islamarkana waxay hay’adaha gargaarka ka digayaan dhibato bina’aadanimo oo soo fool leh.
MUUQAAL: Ethopia ma waxay foolaneysaa dagaal sokeeye?